I-Brazilian Blonde Straight Straight Hair Extensions - I-Soie Hair i-Atlanta I-Brazilian Blonde Straight Straight Hair Extensions - I-Soie Hair i-Atlanta
I-Brazilian Blonde Straight Straight Hair Extensions - I-Soie Hair Atlanta - I-Soie Virgin Hair Extensions
Izinwele ze-Organic VIRGIN. Izandiso zethu zeenwele ezintle ezinobulumko zaseBrazil zize zandiswe ngonaphakade. Ezi zandiso zineengqungquthela kunye nemibala kakuhle, ihlala iminyaka engama-2 ngokunyamekela.
ezi Izandiso zeenwele zaseBrazil zithengwa ngqo ukusuka eNdiya. Zizinye zeentlobo zeenwele ezingabonakaliyo kwindawo yeemarike kwaye zizinwele eziphezulu. Zonke iimveliso zethu zivunwa kwiimeko zabo zendalo kunye nesebo nganye zivela kubaxhasi be-1-2 ukuqinisekisa ukuhambelana.